Home/Nepali News/के पूजा र स्वस्तिमाविच शितयुद्ध छ ? – Nepali News
नायिका पूजा शर्मा र अर्की नायिका स्वस्तिमा खड्काविच शितयुद्ध चलेको खबर नेपाली मिडियामा केही समयदेखि आइरहेको छ । विशेषगरि, नायिका खड्काले एक कार्यक्रममा पारिश्रमिकको बिषयमा गरेको टिप्पणी अर्की नायिका पूजा शर्मा केन्द्रित थियो भन्ने टिप्पणी भएसँगै यी दुइविच शितयुद्ध रहेको चर्चा चलेको हो ।
तर, शितयुद्धको बिषयमा पूजा र स्वस्तिमाले मुख खोलेका छन् । अनलाइनखबरको प्रश्नमा स्वस्तिमाले शितयुद्धको खबरलाई अस्विकार गरिन् । उनले पूजाको नाम नलिई भेटघाट नै खासै नहुने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । खासै भेटघाट नै नहुने भन्दै उनले बजारमा शितयुद्धको खबर चलेको बताइन् ।
प्रदेश ५ को राजधानी नयाँ ठाउँमा : प्रचण्ड – Nepali News
किन रुखो, आक्रमक र लाचार हुन्छन् सरकारी कर्मचारी ? – Nepali News